» सज्जा, मेघा र मुस्कान पुग्लान त उत्कृष्ट ५ मा ?
सज्जा, मेघा र मुस्कान पुग्लान त उत्कृष्ट ५ मा ?
२९ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १८:११
मकवानपुर, २९ फागुन । चर्चित सिंगिङ रियालिटी शो नेपाल आईडलको उत्कृष्ट ६ मा पर्न सफल सज्जा चौलागाईँ, मेघा श्रेष्ठ र मुस्कान रानाभाट यस पटक उत्कृष्ट ५ मा पुग्ने वा नपुग्ने विषयमा चर्चा चलेको छ । उनीहरुमध्ये सज्जा र मुस्कान गत हप्ता बटम ३ मा परेका थिए । त्यस्तै मेघाले ३ पटक बटम ३ को सामना गरेकी छिन् । सिजन ३ को सर्वाधिक अवार्ड विजेता सज्जा चौलागाईले चर्चित प्रतियोगीहरु मुस्कान रानाभाट र किरण कुमार भुजेलसँगै बटम ३ को सामना गरेकी थिईन् । उनीहरुमध्ये किरणले नेपाल आईडलको यात्रा गत हप्ता टुङ्गाएका थिए । बाँकी रहेकी मुस्कान र सज्जामध्ये भोटका आधारमा दुबै जना उत्कृष्ट ५ मा पुग्छन् वा बाहिरिन्छन् भन्ने चर्चा दर्शकहरुले गरेका छन् । गाला राउण्डमा पुगेपछि उत्कृष्ट ६ मा रहेका प्रतियोगीहरुमध्ये मेघा श्रेष्ठ र मुस्कान रानाभाटले ३ पटक बटम ३ को सामना गरेका छन् । सज्जा चौलागाईले पहिलो पटक बटम ३ को सामना गरेकी हुन् । यसरी हेर्दा सज्जा, मेघा र मुस्कानलाई यो हप्ता खतरा भएको दर्शकहरु बताउँछन् । हुन त यो हप्ताको शुटिङ सोमबार तिर नै भईसकेको अनुमान छ यसर्थ को बाहिरियो भन्ने कुराबाट दर्शकहरु अनभिज्ञ भएता पनि निर्णायक र सहभागीहरुलाई भने यो कुरा थाहा भइसकेको छ । तपाईको विचारमा यी ३ प्रतियोगी वा अन्य प्रतियोगीहरुमध्ये यो बिहीबार उत्कृष्ट ५ मा कोको पुग्नेछन् ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला ।
मेघा श्रेष्ठ नेपाल आईडल सिजन ३ को उपाधी दाबेदारमध्येकी एक प्रतियोगी हुन् । उनी सिजन ३ को एकमात्र गोल्डेन माईक विजेता पनि हुन् । मेघाले हालसम्म ६ वटा अवार्ड जितेकी छिन् । मेघाले गाला राउण्डको पहिलो हप्ता बर्जर ग्लामर मोमेन्ट अफ द विक अवार्ड जितेकी थिईन् । त्यस्तै गाला राउण्डको दोस्रो हप्ता मिग्मा लामासँगको जोडी प्रस्तुतिमा र तेस्रो हप्ता नेशन पुन मगरसँगको जोडी प्रस्तुतिका क्रममा उनले कोकाकोला अपलिफ्टीङ पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड जितेकी थिईन् । तेस्रो हप्ता नै उनले रेस्पेक्ट पर्फोमेन्स अफ द विक अवार्ड पनि जितेकी थिईन् । उनले चौथो हप्ता केविन ग्लान तामाङ, सज्जा चौलागाई र प्रविण बेड्वालसँगै संयुक्त रुपमा कोकाकोला अपलिफ्टीङ पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड जितेकी थिईन् । त्यस्तै गाला राउण्डको छैटौँ हप्ता उत्कृष्ट ७ को सोलो प्रस्तुतिका क्रममा बर्जर ग्लामर मोमेन्ट अफ द विक अवार्ड जितेकी थिईन् ।
नेपाल आईडल सिजन ३ को उपाधी दाबेदारमध्येकी एक प्रतियोगी हुन् मुस्कान रानाभाट । उनले नेपाल आईडलमा गाला राउण्डको सातौँ हप्तासम्ममा २ वटा अवार्ड जित्न सफल भएकी छिन् । उनले गाला राउण्डको दोस्रो हप्तामा ‘बर्जर ग्लामर मोमेन्ट अफ द विक’ अवार्ड जितेकी थिईन् । त्यस्तै उनले गाला राउण्डको सातौँ हप्ता उत्कृष्ट ६ को सोलो प्रस्तुतिका क्रममा बर्जर ग्लामर मोमेन्ट अफ द विक अवार्ड प्राप्त गरेकी थिईन् । उनी पोखरा निवासी हुन् ।